Kolonyo uu la socday Wasiir Goodax oo lagu qarxiyey meel ku dhow Balad Xaawo (Sawirro) | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Kolonyo uu la socday Wasiir Goodax oo lagu qarxiyey meel ku dhow Balad Xaawo (Sawirro)
Kolonyo ay la socdeen Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya, Cabdullaahi Goodax Barre iyo wefdi uu hoggaaminayo ayaa qarax lala beegsaday, xilli ay marayeen degaanka Uunsi oo u dhexeeya Degmooyinka Baladxaawo iyo Doolow ee gobolka Gedo.
Wasiirka ayaa la sheegay inuu ka badbaaday qaraxaas.
Qaraxa oo ahaa mid jidka lagu aasay ayaa burburiyay mid ka mid ah gaadiidka wefdiga Wasiirka, waxaana xubno ka tirsan wafdiga ay sheegeen inuusan jirin khasaare ka dhashay qaraxan marka laga reebo dhaawacyo fudud oo gaaray ilaalada iyo xubno ka tirsan wafdiga.
Warar madax banaan ayaa sheegaya in xildhibaano ka tirsan Baarlamanka Somalia oo la socday wasiirka ay ku dhaawacmeen qaraxaas kuwaasoo lagu kala magacaabo oo lagu kala magacaabo Maxuud Cali magan iyo Cabdicasiis Dhaga-qool.
Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya, Cabdullaahi Goodax Barre ayaa saaka gaaray magaalada Garbahaarey ee gobolka Gedo halkaasoo uu ka dhagax dhigay iskuul cusub oo halkaas laga dhisayo.
Kolonyo uu la socday Wasiir Goodax oo lagu qarxiyey meel ku dhow Balad Xaawo (Sawirro) was last modified: August 16th, 2020 by Admin